358 chibatiso fenzi
Mativi Cone fuertes Mudhuri
Wakabatanidza Glass fuertes Mudhuri
Ridzai Insulation Cotton Chipingamupinyi
Metal Microporous fuertes Mudhuri
Color Steel Plate fuertes Mudhuri
Aluminum Plate fuertes Mudhuri
Aluminum Foam fuertes Mudhuri
Acrylic Transparent fuertes Mudhuri
Vanokurira vamwe Soundproofing Fence LRM
Railway acoustic chipingamupinyi
Highway acoustic chipingamupinyi
Air kutonhodza chikwata acoustic chipingamupinyi
Hebei fekitari 30 gore yakaderera mutengo kaviri waya simbi pajira riya, 868 uye 656 kwakakurudzira welded waya fenzi Product Description Material: Kushandisa yepamusoro Iron Rod sezvo mbishi zvokunyama, welded Panel, pashure galvanization, Nezvakakuyiwa Primer, uye Nezvakakuyiwa pamusoro unhani; inogona kurwisa kungatikanganisa uye ultraviolet nemwaranzi kwazvo zvakasimba. Ukobvu upfu unhani ndiyo 100-120 microns kazhinji. The sarudza waya diameters vari 6MM + 2 + 5MM * 1. 8MM * 2 + 6MM * 1. It anowana masimba dzakakwirira simba kudzivisa kuvakwa. Po ...
Hebei fekitari 30 gore yakaderera mutengo kaviri waya simbi pajira riya, 868 uye 656 kwakakurudzira welded waya fenzi
Kushandisa yepamusoro Iron Rod sezvo mbishi zvokunyama, welded Panel, pashure galvanization, Nezvakakuyiwa Primer, uye Nezvakakuyiwa pamusoro unhani; inogona kurwisa kungatikanganisa uye ultraviolet nemwaranzi kwazvo zvakasimba. Ukobvu upfu unhani ndiyo 100-120 microns kazhinji. The sarudza waya diameters vari 6MM + 2 + 5MM * 1. 8MM * 2 + 6MM * 1. It anowana masimba dzakakwirira simba kudzivisa kuvakwa.
System Izvi kazhinji sarudza Square Post (50 * 50mm, 60 * 60mm), Rectangular Post (80 * 60 * 2 5mm, 120 * 60 * 3mm.) With mukuru simba uye zvichingodaro. With epurasitiki ngowani kana Roofing rainhat. The rakapedzwa pamusoro Kazhinji kwakakurudzira uye powder unhani, kana neimwe nzira.
-Double waya fenzi ane kwakakurudzira uye polyester unhani rinomirira 130 micron ukobvu mu avhareji.
-Available chero RAL mavara.
-Standard dzakakwirira 1.03m-1.43m-2.03m. Other miti kusvikira mirairo.
8/6/8 welded fenzi
noruzhowa, welded fenzi
6/5/6 Double waya fenzi
8/6/8 Double waya fenzi
Kurongedza Details & Kwiaty Details
c. Sezvo makasitoma kudiwa
Mazuva 15-20 pashure murayiro yasimbiswa
Hebei Jinbiao Construction Zvekushandisa Tech Corp., Ltd rakaumbwa muna 1986 sezvo mukugadzira waya pajira riya noruzhowa muna Anping inova waya pajira riya mujinga China. Health, mafaro, kubudirira, chokwadi, simpleness, zvisikwa zviri zvinokosha shure Jinbiao hwakarurama kubudirira munyika yose.
Mukutanga pachikuva, JINBIAO kugadzirwa Barbed waya chete, uye pave China, dzakawanda njanji uye migwagwa dzakavakwa. Saka pano anouya kufara fenzi indasitiri. Panguva iyoyowo, JINBIAO atanga rwendo kuita mhando dzose fenzi. With makore 26 hondo, JINBIAO akawana mukurumbira wakanaka kwazvo munyika yose.
chinangwa Anotipa: Kuti uvandudze fenzi indasitiri pamwero pazvinangwa zvakafanana kubudirira.
mweya Anotipa: Health, mafaro, kubudirira, chokwadi, simpleness, zvisikwa.
-Zvinhu yakanakisisa basa, mazuva 7 pavhiki vamwe vanhu kupindura foni, maawa Mon-Fri 24 kukushumirai chero nguva.
Previous: 358 chibatiso fenzi
Next: Temporary fenzi
1/2 padiki Welded Wire Mesh Fence
Vakafugama Wire Mesh Fence
Kwakakurudzira Welded Wire Mesh Fence
Upfu Coated Wire Mesh Fence
Makwai Wire Mesh Fence
Wire Mesh Fence For mudhuri